Sheekada filimka NTR Kathanayakudu: Balakrishna oo 100% u hagar baxay nolosha filimka aabihiis looga hadlaayo – Filimside.net
Sheekada filimka NTR Kathanayakudu: Balakrishna oo 100% u hagar baxay nolosha filimka aabihiis looga hadlaayo
Fanka Telugu ama Tollywood Industry waxaa sameyn ku leh qoyska ku aftirsadaan NTR ama ninka magaca fanka Telugu maqaamka ugu sareeyo gaarsiiyay Nandamuri Taraka Ramarao ama loo yaqaan N. T. Rama Rao.
Halyee Nandamuri Taraka Ramarao ama loo yaqaan N. T. Rama Rao wuxuu geeriyooday sanadii 1996 asigoo wadno xanuun u geeriyooday waa Superstar fanka Telugu sidoo kalena siyaasada gobolka Telugu heer sare ka gaaray ilaa uu wasiir ka noqday.
Haddaba filimka noloshiisa looga hadlaayo Nandamuri Taraka Ramarao ama loo yaqaan N. T. Rama Rao waxaa loo bixiyay NTR Kathanayakudu waxaana hogaamiye ka ah oo nolosha aabihiis shaashada ku matalaayo atooraha Telugu haatan awooda balaaran ku leh Nandamuri Balakrishna.
Jilaayaasha filimkan: Nandamuri Balakrishna, Vidya Balan, Kalyan Ram, Nithya Menen iyo Rana Daggubati oo muuqaal marti ah ku leh.
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 51-daqiiqo.
Fariinta Filimkan Oo Kooban: Qaybta hore sheekada filimkan waxaa looga hadlaa Rama Rao (Balakrishna) oo shaqadiisa ah dhanka siyaasada madaama uu wax soo bartay dhul weynaha Telugu oo xiligaas gumeysiga Ingiriiska gacantiisa ku jiray ayuu ka shaqo bilaabay balse shaqadan uusan ku qanacsaneyn wuu isaga tagaa.
Rama Rao (Balakrishna) wuxuu go’aan ku gaaraa inuu jilaa noqdo kaliya waxaa riyadiisa garab ku siineyso xaaskiisa Tarakam(Vidya Balan) oo go’aan walbo noloshiisa ka caawineyso waxaana u suura galeyso si dhaqsi ah inuu ku noqdo jilaa caan ah oo gobolka Telugu laga jeclaado aqoonsi weyna ku yeesho.
Rama Rao (Balakrishna) wuxuu noqonaa Superstar-ka Telugu awooda badan, laakiin wuxuu go’aan ku gaaraa inuu hogaamiye siyaasi noqdo si uu dadkiisa u garab istaago dhanka hormarka, la dagaalanka musuq maasuqa iyo doorashada hogaan dadka wax u qaban karo.
Markale Rama Rao (Balakrishna) riyadiisa si uu u gaaro xaaskiisa Tarakam(Vidya Balan) garab ku siineyso balse wuxuu la kulmaa caqabado badan caddow badan u yeelanaa waxaana qaybaha dambe filimkan loo daawan doonaa halganka uu u galaayo Rama Rao (Balakrishna) inu siyaasada saameyn ku yeesho.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimkan: NTR Kathanayakudu waa filim sheeko ahaan diyaarsan kaasi oo ay qoysaska daawan karaan si heer sare ahna loogu soo bandhigay nolosha Superstar NTR Rama Rao marxaladaha ay soo martay.
Director Krish waxaa fiicneyd inuu masuuliyad dheeraad ah qaybaha dambe micnaha waqtiga uu soconaayo 2-saac iyo 51-daqiiqo inuu soo yareeyo si looga saaro muuqaalada qaar ee aan loo baahneyn waayo halka saac hore waa heer sare halka saac dambena waa mid wacan kaliya dhirirka uu waqti ahaan soconaayo ayaa ah dhaliisha filimkan.
Filimka NTR Kathanayakudu qaybta kowaad waxaa lagu soo bandhigay NTR Rama Rao sida uu fanka kusoo galay ilaa uu Superstar weyn ka noqday iyo tilaabada uu siyaasada u qaaday.
Aqristayaal waxaa jiri doono qayb labaad filimkan leeyahay oo la dhaho N.T.R: Mahanayakudu laguna soo bandhigi doono siyaasada marka uu galay NTR Rama Rao waxa u qabsoomay ilaa uu Wasiir ka noqday iyo geeridiisii.
Bandhiga Jilaayaasha: Inaba caadi ma ahan Balakrishna wuu u hagar baxay filimkan nolosha aabihiis looga hadlaayo madaama uu ahaa qof aad ugu dhow aabihiis shaashada wuxuu kusoo bandhigay in NTR Rama Rao lahaa wajiyo kala duwan oo taageerayaashiisa ka qarsanaa dhanka noloshiisa gaarka ah.
Waa naadir in Balakrishna lagu arko filim arimaha qoyska nolosha ka hadlaayo waayo waligiis Action awood badan oo la xarakeenayo ayuu sameyn jiray laakiin Superstar-kan masuuliyada uu qaatay inuu shaashada aabihiis ku matalo si dagan ayuu kaalintaas kaga soo dhalaalay.
Vidya Balan boos awood badan ayay filimkan ku leedahay waxayna udub dhexaad u tahay qaabka sheekada u dhaceyso ayadoo dhan walbo ka caawineyso Balakrishna.
Sidoo kale Sumanth and Kalyanram doorar wacan ayay ku leeyihiin filimkan waxaa intaas dheer Rana Daggubati doorkiisa muuqaalka martida ah inuu mid wacan yahay si la mid ah Rakul Preet oo filimkan Sridevi ku matashay muuqaalkeeda martida ah waa mid heer sare ah.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimka NTR Kathanayakudu:
Fariinta arimaha qoyska ee qiirada badan sidoo kalena mada daalo wacan leh
Muusiga filimkan oo heer sare ah
Muxuu Ku Liitaa Filimka NTR Kathanayakudu:
Waqtiga dheer uu soconaayo 2-saac iyo 51-daqiiqo waxay ahayd wax badan in laga yareeyo ugu yaraan 30-daqiiqo ama 20-daqiiqo.
Qiimeynta Sheekada Filimka NTR Kathanayakudu: 3.25/5 (Sedex dhibic iyo rubac)
Gunaanad: Filimka NTR Kathanayakudu waa mid daawadayaasha iyo taageerayaasha Superstar-kii NTR Rama Rao ku raaxeesan doonaan qaabka noloshiisa looga hadlay madaama mada daalo iyo qiiro la isku daray ayadoo hab la fahmi karo fariinta socdaalka nolosha halyeegan qaybtiisa kowaad looga hadlay.
Culees waxaa ku noqon doonto filimkan lacagaha 70 Crore gaarayo ee kooxda cajaladaha qeybiyaan ku iibsadeen taasi oo laga rabo inuu dib usoo celiyo xiliga la daawanayana waa mid mashquul badan oo Koonfurta Hindiya aflaan waa weyn ayaa la isla saarayaa marka nasiibkiis ayuu qabaa waxaa bad baadin karaan NTR Rama Rao geeriyooday iyo wiilkiisa filimkan jilaayo Balakrishna taageerayaashooda haddii ay is biirsadaan oo ay si joogto ah ugu soo daawasho tagaan.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka NTR Kathanayakudu ee nolosha NTR Rama Rao looga hadlaayo kuna fara yareestay wiilkiisa Balakrishna: